Biyaha ayaa lagama maarmaan u ah soo saarista cuntada, beeraha ayaa leh qiyaastii 70 boqolkiiba isticmaalka biyaha cusub ee adduunka. Maaddaama dalalku ay kordhiyaan wax soo saarka beeraha (sannadka 2050, FAO waxay ku qiyaaseysaa in ku dhowaad 9,7 bilyan oo qof ay u baahan doonaan quudin), dhulka waraabka loo baahan yahay wuxuu u baahan doonaa in ka badan 50%. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka cimilada ayaa durba yareynaya saadka biyaha loo heli karo dalagyada gobollada qaarkood.
Si looga caawiyo beeralayda inay la qabsadaan dhibaatadan, Xarunta Caalamiga ee Baradha (CIP) waxay baareysaa qaabab lagu hormarinayo waraabka. Daraasadihii ugu dambeeyay ee saynisyahannada iyo ardayda ka socda CIP iyo Jaamacadda Qaranka ee Agrarian ee La Molina ee Peru waxay xaqiijiyeen in sawirrada kamaradaha infrared (thermographic) loo isticmaali karo in lagu ogaado culeyska biyaha ee dalagyada sidaasna ay u isticmaalaan biyaha si hufan.
Koox baarayaal ah oo uu hogaaminayo saynisyahano CIP David Ramirez ayaa sameeyay tijaabooyin isdaba joog ah oo u dhaw magaalada Lima (Peru) si loo ogaado sida iskudhaarka midabaynta iyo sawirada infalawansada loo adeegsan karo si loola socdo walaaca biyaha ee dhirta baradhada.
Baarayaasha ayaa sawiray berrinka baradhada maalintii waxayna isticmaaleen barnaamij furan oo CIP ah oo la yiraahdo Thermal Image Processor (TIPCIP) si loo ogaado goorta dhirtu kulushahay in la waraabiyo. Iyagoo waraabinaya kaliya markay dhirtu gaarto heerkan, cilmi baarayaashu waxay awood u yeesheen inay si weyn u yareeyaan xaddiga biyaha loo isticmaalo waraabka.
"Hadafku wuxuu ahaa in la go'aamiyo xaddiga ugu yar ee biyaha ee loo baahan yahay baradhada si loo helo dalag wanaagsan," ayuu yiri Ramirez.
Isku darka kormeerka iyo waraabka faleebada ah ayaa awood u siin kara beeraleyda inay yareeyaan xaddiga biyaha ee ay u baahan yihiin si ay ugu beero baradhada ugu yaraan 1600 mitir cubic halkii hektar, taas oo ah kala bar tirada biyaha ee loo isticmaalo waraabka dusha dhaqameed,
Isku darka maaraynta biyaha ee ugu wanaagsan iyo soo saarista noocyada u adkaysiga abaarta ayaa si weyn u kordhin kara caabbinta biyaha ee baradhada waxayna u oggolaan kartaa in lagu beero gobollada ay yartahay ama aan cunnada laga beerin hadda, ama xilliyada bilaha qalalan ee dhul-beereedku dhacayo.
Ramirez wuxuu sharraxay in iyadoo kaamirooyinka infrared-ka lagu rakibi karo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si loola socdo culeyska biyaha ee beeraha waaweyn, haddana qiimaha qalabkaas waa mid mamnuuc ka ah beeraleyda yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Sidaa darteed, wuxuu qorsheynayaa inuu tijaabiyo ikhtiyaar cusub - qalab fiilooyin ah oo taleefanka casriga ah u beddelaya kamarad infrared ah oo qiimihiisu yahay $ 200. Saynisyahannada CIP waxay dhowaan soo saareen nooc cusub, oo ka faaiidaysi badan user TIPCIP oo loogu talagalay taleefannada casriga ah waxayna qorsheynayaan nooc mustaqbalka ah oo bixin doona macluumaad gaar ah oo ku saabsan goorta iyo inta biyo loo baahan yahay.
"Adoo adeegsanaya tikniyoolajiyadda furitaanka furan, waxaan ka caawin karnaa beeralayda inay soo saaraan cunno biyo yar," ayuu xaqiijiyay Ramirez.
Si kastaba ha noqotee, ayuu raaciyay, tiknoolajiyada noocan oo kale ah waa in lagu kaabo wacyigelin weyn oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay maareynta biyaha waara.
Daraasaddan waxaa taageeray Bangiga Adduunku iyada oo loo marayo Barnaamijka Innovation Agrarian National (PNIA) iyo barnaamijka cilmi baarista ee CGIAR.
Tags: kormeerka cadaadiska biyahawaraabkabiyo badbaadinta
Biqitaanka Xirfadeed ee geedka baradho
Koriyo baradho istaarijka Khibrad guul leh Lyckeby
GRIMME Waxay Soo Bandhigeysaa Sameeyaha Qudaarta cusub